फेरि आयो अर्को दुखद घटना ! आफ्नै श्रीमतीले श्रीमानको हत्या – Sandesh Munch
फेरि आयो अर्को दुखद घटना ! आफ्नै श्रीमतीले श्रीमानको हत्या
May 18, 2020 1647
५ जेठ, विराटनगर । विराटनगरका औषधि व्यवसायी देवीप्रसाद दुलालको आइतबार भएको हत्यामा श्रीमतीकै संलग्नता रहेको प्रहरीले निश्कर्ष निकालेको छ ।
शव भेटिएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले श्रीमती मीना श्रेष्ठ दुलालकै योजनामा हत्या भएको निश्कर्ष निकालेको हो । यद्यपि यो विषयमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराउने बताएको छ ।
हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले मीनासँगै अर्का युवक ब्रम्हदेव साहलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका साह दुलालले सञ्चालन गर्ने माँ देव पाथीभरा फर्माका पूर्वकर्मचारी हुन् ।
विराटनगर महानगरपालिका– १० मधुमारा बस्दै आएका सुनसरीका खनारका ३३ वर्षीय दुलाल अचेत भएको भन्दै शनिबार राति करिब ३ बजे श्रीमतीले गोल्डेन अस्पताल ल्याएकी थिइन् । अस्पतालले राति नै मृत्यु भएको बताएको थियो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार साह र आफ्नी श्रीमतीको अबैध सम्बन्धका बारेमा दुलालले केही दिनअघि थाहा पाएका थिए । त्यसपछि उनीहरुबीच विवाद बढेको थियो । श्रीमानसँग विवाद बढेपछि महिलाकै योजनामा घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक निश्कर्ष छ ।
मोरङका प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारीले श्रीमतीसहित अर्का एक व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको पुष्टि गरे । पक्राउ परेका व्यक्ति लहान घर भई हाल विराटनगर बस्दै आएका छन् ।
डोरीले घाँटी बाधेर हत्या
सुतेको बेला दुलालको हत्या भएको प्रहरीको निश्कर्ष छ । प्रहरीले हत्यामा प्रयोग भएको डोरी दुलालको घरनजिकै झाडीमा भेटेको थियो ।
उनको घाँटीमा डोरीले बेरेको निलडाम र निधारमा ठूलो चोट छ । निधारको चोट भने प्रतिकार गर्न खोज्दा खाटमा ठोक्किएर लागेको प्रहरीको भनाइ छ ।
मीनाले बताएअनुसार राति २ः४१ बजे उठेर हेर्दा दुलाल अचेत अवस्थामा थिए । श्रीमान अचेत भेटिएपछि मीनाले छिमेकी र दुलालका साथीलाई खबर गरेपछि राति करिब ३ बजे एम्बुलेन्समा राखेर गोल्डेन अस्पताल पुर्‍याएका थिए ।
Prevखुशीको खबर ! अमेरिकाले निकालेको औषधीले बिरामी चट्ट निको भएको हुदा पुरा अमेरिका खुशीको सिमा छैन हेर्नुहोस
Nextअब नेपाल पनि एकदम उच्च जोखिममा कोरोना संख्या ३०४ पुगेको जसमा दुइ जनाको निधन पुगेको जसमा दुइ जनाको निधन !